सेक्स चाहना बढी बढी हुनु कुनै रोग हो त ? – Saurahaonline.com
सेक्स चाहना बढी बढी हुनु कुनै रोग हो त ?
प्रश्न: म २५ वर्षीय अविवाहित युवक हुँ । मलाई सेक्सप्रति बढी नै चाहना हुन्छ । यस्तो चाहना ९ कक्षा पढ्दादेखिकै हो । म अहिले बीबीएस तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत छु । अझै पनि त्यस्तै हुन्छ । दिनमा दुई–तीन पटक हस्तमैथुन गर्छु । मलाई युवती देख्नासाथ उत्तेजना आउँछ अनि हिँड्दा पनि लाज लाग्ने स्थिति सिर्जना हुन्छ । के सेक्स चाहना बढी हुनु कुनै रोग हो ? हस्तमैथुन धेरै गरे त्यसको नकारात्मक असर पर्छ ?
यौनचाहना हामीलाई प्रकृतिले दिएको एउटा विशेषता हो र सबै स्वास्थ्य व्यक्तिमा यौनचाहना हुन्छ । यो हाम्रो वंश निरन्तरताका लागि पनि आवश्यक छ । यौनसम्बन्धी हाम्रा चासो तथा चाहनाहरू मस्तिष्कबाट सुरु हुन्छन् । मस्तिष्कको hypothalamus गक भनिने सानो अङ्गले यौनसम्पर्क राख्ने जस्ता आधारभूत व्यग्रता उत्पन्न गर्छ भने अर्को अङ्ग Cerebral Cortex ले हामीले सिकेका कुरा तथा अनुभवहरू अभिलेख राख्ने कार्य गर्छ । यौन संवेदनशीलतासम्बन्धी कुराहरू पनि यही भागबाट सञ्चालित हुन्छन् । यौनेच्छालाई प्रभावित तुल्याउने हार्मोनहरूको उत्पादन तथा सञ्चालनमा पनि मस्तिष्कको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । यी सबै कुराको संयुक्त प्रभावबाटै यौनसम्बन्धी क्रियाकलापहरू निर्देशित हुन्छन् । मोटामोटी रूपमा हेर्दा यौनेच्छाको सञ्चालनमा विभिन्न प्रणालीहरू सक्रिय देखिन्छन् । एकातिर इन्डोक्राइन सिस्टम अन्तर्गतका रागरसहरूले त्यसको सञ्चालनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् भने अर्कातिर इन्द्रिय प्रणाली अनि मस्तिष्कले ।
यौनेच्छा राम्रोसँग हुनुलाई त सौभाग्य नै मान्नुपर्छ । यौनचाहना पनि सबै व्यक्तिमा एकैनासको हुँदैन । कसैमा बढी हुन्छ त कसैमा कम । कुनै व्यक्तिमा यति नै यौनचाहना हुनुपर्छ भन्ने छैन । हुनुपर्नेभन्दा बढी यौनचाहना भएको स्थितिलाई excessive sexual desire भएको भनिन्छ, त्यसका लागि hyperactive sex वा hypersexuality शब्द प्रयोग गरिन्छ । यस्तो स्थिति चिकित्सकीय दृष्टिकोणले ध्यान दिनुपर्ने गरी बढी नै भएको हुनुपर्छ । यद्यपि कति यौनचाहनालाई बढी भन्ने कुरामा अझै पनि विवाद छ । कुनै व्यक्तिले सामान्य मानेको यौन चाहनालाई अर्को व्यक्तिले कम वा बढी मान्न सक्छ ।
उपचारका लागि बानी–बेहोरा परिवर्तन गर्ने विधिहरू फाइदाजनक हुन्छन् । त्यसैगरी साइकोथेरापी वा औषधीको प्रयोगबाट यसलाई केही कम गर्न सकिन्छ । केही मनोस्थितिसम्बन्धी खराबीमा औषधी दिन सकिन्छ । हामीलाई थाहै छ टेस्टेस्टेरोन हार्मोन नै यौनेच्छालाई निर्देशित गर्ने प्रमुख तत्व मानिन्छ । कतिपय स्थिति जसमा विशेष गरेर पुरुष हार्मोन बढी हुनु यसको कारण हुन सक्छ, त्यसलाई रोक्ने किसिमका औषधी खान सकिन्छ । समस्याको समाधानका लागि तपाईंलाई विज्ञ चिकित्सकले सहयोग गर्न सक्छन् । कान्तिपुर साप्ताहिकबाट